Petroleum Products Distribution License (Filling Station) – PPRD
Petroleum Products Distribution License (Filling Station)
(က) စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ဧရိယာနယ်နိမိတ်ကို အမြင့် ၆ ပေထက်မနည်းသော အကာအရံ [သံဇကာ(သို့) သံဆူးကြိုး (သို့) သံပြား(သို့) သံပန်း (သို့) အုတ် (သို့) ကွန်ကရစ်ဝင်းခြံ] ထားရှိရမည်။ ဆိုင်မျက်နှာစာများကို ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်။
( ခ) အဆောက်အဦများကို အလွယ်တကူမီးမလောင်နိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့်သာ ဆောက်လုပ်ရမည်။
(ဂ) စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ဝင်းအတွင်း လူနေအိမ်၊ အဆောက်အဦများအား ဆောက်လုပ်ခြင်းမပြုရ။ မီးဖို၊ မီးလောင်နိုင်သည့် အပူထွက်စေသောအရာများမထားရှိရ။
(ဃ) သိုလှောင်ကန်များတွင် စက်သုံးဆီအမျိုးအစားနှင့် ဝင်ဆံ့ဂါလန်များကို သိသာထင်ရှားစွာရေးသားဖော်ပြထားရမည်။
(င) ဆီချပွိုင့်များတွင် စက်သုံးဆီအမျိုးအစားကို စာသား/အရောင်ဖြင့် သတ်မှတ်ဖော်ပြထားရမည်။
(စ) သိုလှောင်ကန်၊ ပိုက်လိုင်း၊ ပိုက်ပျော့ (Flexible Hose Pipe) နှင့် ဘား (Valve) များအား နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ရမည်။
(ဆ) မြေပေါ်သိုလှောင်ကန်များတွင် ဆီထိန်းနံရံ၊ ဆီထိန်းကြမ်းခင်း၊ ဆီဆင်းမြောင်း၊ ဆီစုကန်နှင့် ဆီစစ်ကန်တို့ကို တည်ဆောက် ထားရမည်။
(ဇ) အဆောက်အဦများ၊ ဆီသိုလှောင်ကန်များ၊ ဆီပန့်များတွင် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်၊ မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ် မဖြစ်ပေါ်စေရေး လုံလောက်သော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို အချိန်ပြည့်ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဈ) လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသည် မီးတောက်မထွက်စေနိုင်သောအမျိုးအစား (Flame Proof) ဖြစ်ရမည်။
(ည) ဆီပန့်များသည် Underwriters Laboratories Standard (UL 87) သို့မဟုတ် ယင်းနှင့်အလားတူ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်း နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။
(ဋ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်နိုင်ရေးအစီအမံ၊ ဆီယိုဖိတ်မှုကာကွယ် ရေးနှင့် ရှင်းလင်းရေးအစီအမံများကို စနစ်တကျထားရှိဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဌ) မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်သည့်လုံလောက်သောရေပမာဏ၊ မီးသတ်ပိုက်လိုင်း၊ မီးသတ်ဆေးနှင့် မီးသတ်ပစ္စည်းများ ထားရှိရမည်။
(ဍ) စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ဝန်ထမ်းများအား မီးငြိမ်းသတ်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများနှင့် စက်သုံးဆီကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆိုင်ရာသင်တန်းများတက်ရောက်စေရမည်။
၃။ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်အတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ရှိသောဇုန်ကို အောက်ပါအတိုင်း (၃) မျိုး သတ်မှတ်ထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဇုန်အလိုက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရေး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ဇုန်(က) ဘေးအန္တရာယ်ရှိသောလေထုသည် အမြဲတမ်း (သို့မဟုတ်) အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာတည်ရှိသည့်နေရာ၊
(ခ) ဇုန်( ခ) ဘေးအန္တရာယ်ရှိသောလေထုသည် ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနိုင်သောနေရာ၊
(ဂ) ဇုန်( ဂ) ဘေးအန္တရာယ်ရှိသောလေထုသည် တိုတောင်းသောအချိန် ကာလအတွင်း၌သာ ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနိုင်သောနေရာ၊
၄။ ဘေးအန္တရာယ်ရှိသောဇုန်၏ နယ်ပယ်အပိုင်းအခြားသတ်မှတ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
ဆီဖြည့်ပန့်၏အောက်ပိုင်း ဆီစုပ်ပိုက်ရှိသည့်နေရာ၊ မော်တော်ယာဉ်ပြင်အလုပ်ရုံ (Repair Garage) အတွင်း လေဝင်လေထွက်မကောင်းသည့်မြေအောက်လုပ်ငန်းခွင်နေရာ၊
မြေပေါ်သိုလှောင်ကန်၏ ဆီထိန်းနံရံ (Sump Wall) ၏အမြင့်သည် သိုလှောင်ကန်နံရံနှင့် ဆီထိန်းနံရံ (Sump Wall) ကြားအကွာအဝေးထက်ပိုများပါက ဆီထိန်းနံရံ (Sump Wall) ၏အတွင်း နေရာအားလုံး၊
– မြေအောက်သိုလှောင်ကန်ဆီချပွိုင့်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်မြေမျက်နှာပြင်အောက်ရှိ ကန် ၊ ကျင်း (pit) ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် ဇုန်(ခ) သို့မဟုတ် ဇုန်(ဂ) နေရာတွင်ရှိလျှင် ယင်းကန် ၊ ကျင်း(pit) ၏အတွင်းနေရာတစ်ခုလုံး၊
ကန်၊ ကျင်း(Pit)သည် ဇုန်(ခ) သို့မဟုတ် ဇုန်(ဂ)အတွင်းကျရောက်လျှင် ဆီငွေ့ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းသည့်စနစ်ဆောင်ရွက်မည့်ကိရိယာများထည့်သွင်းထားလျှင် ယင်းကန်၊ ကျင်း (Pit) ၏အတွင်းနေရာ၊
ဆီဖြည့်ပန့်ကိုယ်ထည် (Dispenser enclosure) မှရေပြင်ညီအတိုင်း ပေ ၂၀ အတွင်း ကြမ်းခင်းမှ ၁၈ လက်မအမြင့်အတွင်း၊
မြေပေါ်၊ မြေအောက်သိုလှောင်ကန်၏ အငွေ့ထွက်ပေါက် (vent) ၏ ၅ ပေ မှ ၁၀ ပေ ပတ်လည်အတွင်း၊
၅။ အငွေ့ထုတ်ပိုက် (Vent Pipe) နှင့် အဆောက်အဦသည် အနည်းဆုံး (၅) ပေ၊ လေစုပ်ကိရိယာ (Powered Ventilation Air Intake Devices) သည် အနည်းဆုံး (၁၅) ပေ ကွာဝေးရမည်။
၆။ ဆီပန့် (Fuel Dispensing Pump) တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အကွာအဝေးသည် (၅) ပေထက် မနည်းရှိရမည်။
၇။ ဆီပန့် (Fuel Dispensing Pump)နှင့် အခြားအဆောက်အဦ၊ ဆီပန့် (Fuel Dispensing Pump)နှင့် ခြံစည်းရိုး (Property Line) တို့၏ အကွာအဝေးသည် (၁၀) ပေ ထက်မနည်းရှိရမည်။
၈။ ဆီသိုလှောင်ကန်၊ ဆီချပွိုင့်၊ ဆီငွေ့ထုတ်ပိုက်၊ ဆီပန့်တို့သည် ထရန်စဖော်မာ၊ ဗို့အားမြင့်လျှပ်စစ်ကြိုးများနှင့် အနည်းဆုံး (၅၀) ပေ ကွာဝေးရမည် (သို့မဟုတ်) စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် လျှပ်စစ်ဌာနတို့မှ သတ်မှတ်ထားသော လုံလောက်‌သည့် ဘေးကင်းမှုအကွာအဝေးအတွင်းထားရှိနိုင်သည်။
၉။ Flame Roof အမျိုးအစား မီးစက်ကို ဆီချပွိုင့်၊ ဂိုဒေါင်၊ သိုလှောင်ကန်၊ ဆီငွေ့ထုတ် ပိုက်၊ ဆီပန့်တို့နှင့် (၂၀)ပေထက် မနည်းသော အကွာအဝေးတွင် မီးစက်ရုံအတွင်း စနစ်တကျ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။
၁၀။ စစ်ဆေးသူအရာရှိက လိုအပ်သည်ဟုယူဆပါက မီးကာနံရံများထားရှိခြင်း၊ အထူးအကာအကွယ်များ ပြုလုပ်ထားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၁။ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း (အရောင်းဆိုင်) များအကြား အနည်းဆုံးရှိသင့်သော အကွာအဝေးသတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
( Psi) ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့
ပိုက်လိုင်းအရွယ်အစား အနည်းဆုံး သတ်မှတ်အကွာအဝေး
၁။ ၁၂၈၀ ၄၀ လက်မ ၁၀၀၀ ပေ
၂။ ၁၂၈၀ ၃၆ လက်မ ၉၀၀ ပေ
၃။ ၁၂၈၀ ၃၂ လက်မ ၈၀၀ ပေ
၄။ ၁၂၈၀ ၃၀ လက်မ ၇၃၀ ပေ
၅။ ၁၂၈၀ ၂၈ လက်မ ၇၀၀ ပေ
၆။ ၁၀၅၀ ၂၄ လက်မ ၅၅၀ ပေ
၇။ ၈၀၀ ၂၀ လက်မ ၄၀၀ ပေ
၈။ ၈၀၀ ၁၈ လက်မ ၃၆၀ ပေ
၉။ ၆၀၀ ၁၆ လက်မ ၂၈၀ ပေ
၁၀။ ၃၉၀ ၁၄ လက်မ မှ ၁၀ လက်မ ၂၀၀ ပေ
၁၁။ ၃၅၀-၃၀၀ ၈ လက်မ မှ ၄ လက်မ ၁၅၀ ပေ
မှတ်ချက်။ (၁) ဖော်ပြပါအကွာအဝေးသတ်မှတ်ချက်များသည် မြို့တော် / မြို့နယ်စည်ပင်သာယာဧရိယာများ၏ ပြင်ပတွင်ရှိသော ပိုက်လိုင်းများအတွက်သာ သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(၂) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုက်လိုင်း အရွယ်အစားအားလုံးနှင့် အနည်းဆုံး ၅၀ ပေ အကွာအဝေးမှ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များတည်ဆောက်ရမည် ဖြစ်သည်။
၁၂။ Filling Stations Master Plan အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Grade များခွဲခြား သတ်မှတ်ထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ Grade အလိုက် ယာဉ်တွဲဖော်ပြပါသတ်မှတ်ချက်များကို ကိုက်ညီ ပြည့်စုံစွာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်-
(က) Grade A အဆင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်(အရောင်းဆိုင်) အတွက် သတ်မှတ်ချက်များ
Sr. Criteria Grade A
1 Available Products Multi-products (MS, Octane 92, 95, 97, Diesel, Premium Diesel, Lubricants, LPG,…..)
2 Area 87120 sqft (2 acres) and above.
3 Frontage 200 feet and above.
4 Storage Capacity Not to exceed 76800 gals for MS, Octane 92, 95, 97, Diesel, Premium Diesel,…. And 20 M-tons and above for autogas.
5 Numbers of Dispensers 12 numbers and above.
6 Material standards Tanks, pipelines, valves, dispensers and apparatus must be complied with API standards or internationally recognized standards. All fuel tank must be underground tank.
7 Firefighting system Automatic firefighting system shall be installed with foam system and shall have adequate fire hose reel, water source and skilled persons in firefighting as well as adequate portable fire extinguishers.
8 Green Area 10 percent and above green area of aggregate area.
9 Environmental Necessary assessments must be submitted according to guideline of Environmental Conservation Department.There shall be at least an oil water separator to control oil spill which may affect to environment.
10 Service for convenience There shall be public toilet, car service, car wash area, minimart and coffee and fast food shop.
11 Traffic safety Tank trucks can be easily maneuvered and customers vehicles (including commercial vehicles) can easily be accessed and leave the dispensers. Entrance and exit shall be at least 40 ft wide each. There shall be sufficient space for three lanes or at least 30 feet between two pump-islands.
12 Automation System There shall be Automatic over-flow protection system,
Automatic Tank gauging system, POS system, Online monitoring system, Vapor recovery system, Leak monitoring system, Emergency generator. (Prefer Bank Network Payment System and attended self-service.)
13 Operation time 24 hours service (Multiple shift)
၁၃။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း (အရောင်းဆိုင်) တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်လိုသူသည် အဆိုပြုလျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ အဆိုပြုလျှောက်ထားရမည်-
(က) လိုင်စင်လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုသက်သေခံလက်မှတ်မိတ္တူ၊
( ခ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ Email Address နှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊
( ဂ) မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထား သို့မဟုတ် မြေသုံးစွဲနိုင်ကြောင်း အထောက်အထား၊
(ဃ) အရောင်းဆိုင်တည်ဆောက်မည့်မြေနေရာ၏ Google Map၊
(င) အဆိုပြုအရောင်းဆိုင်၏ အကွက်ချပုံစံ (Layout Plan)၊
၁၄။ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားပြည့်စုံပါက အဆိုပြုလျှောက်ထားလာခြင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတင်ပြရန် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံးများသို့ အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး အရာရှိသည် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ ရုံးချုပ်သို့ စိစစ်တင်ပြရမည်−
( ခ) အရောင်းဆိုင်တည်ရှိရာဒေသ၏ ယာဉ် နှင့် လူဦးရေအခြေအနေ
( ဂ) ယာဉ်ဖြတ်သန်းသွားလာမှုနှင့်စက်သုံးဆီသုံးစွဲမှုအခြေအနေ
(ဃ) အဆိုပြုနေရာနှင့် ၃ မိုင်ပတ်လည်အတွင်းရှိ လိုင်စင်ခွင့်ပြုပြီးအရောင်းဆိုင်နှင့် ဆောင်ရွက်ဆဲအရောင်းဆိုင်များအခြေအနေ
( င) အဆိုပြုနေရာအနီးတွင်အနာဂတ်တွင်ဖော်ဆောင်မည့်စီးပွားရေးစီမံကိန်းများ အခြေအနေ
( ဇ) ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများနှင့်လွတ်ကင်းမှုရှိ၊မရှိ
( ဈ) ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေများနှင့်လွတ်ကင်းမှုရှိ၊မရှိ
၁၅။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ အရောင်းဆိုင်အသစ်တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသင့်ပါက ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနိုင်မည့်အရောင်းဆိုင် အဆင့်ကိုဖော်ပြလျက် အရောင်းဆိုင်တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း ရုံးချုပ်မှလုပ်ငန်းရှင် ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်။
၁၆။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် အရောင်းဆိုင်တည်ဆောက်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားမှုကိုစိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ လျှောက်ထားမှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့လျှင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ငြင်းပယ်ကြောင်း လျှောက်ထားသူထံအကြောင်းကြားမည်။
၁၇။ အထက်အပိုဒ် (၁၅)ပါ အကြောင်းကြားမှုကိုလက်ခံရရှိသူသည် တည်ဆောက်မည့်အရောင်းဆိုင်၏ အကွက်ချပုံစံ (Layout Plan) နှင့် အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းပုံစံ (Design & Detail Drawing) တို့ကိုအတည်ပြုပေးပါရန် အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထား ပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-(က) လိုင်စင်လျှောက်ထားသူ၏ (၂ × ၁.၅) လက်မဓာတ်ပုံ၊ အမည်နှင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုသက်သေခံလက်မှတ်မိတ္တူ၊
( ခ) အရောင်းဆိုင်အမည်၊
(ဂ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ Email Address နှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
( င) မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထား သို့မဟုတ် မြေသုံးစွဲနိုင်ကြောင်း အထောက်အထား၊
( စ) တည်ဆောက်မည့်မြေနေရာအထောက်အထား မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅) နှင့် (၁၀၆) မိတ္တူနှင့် အတိုင်းအတာအကျယ်အဝန်း၊
(ဆ) သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမည့် စက်သုံးဆီအမျိုးအစားများ၊ သိုလှောင်ကန်အရေအတွက်နှင့် ဝင်ဆံ့ဂါလန်ပမာဏ၊
(ဇ) တည်ဆောက်မည့်အကွက်ချပုံစံ (Layout Plan)၊ အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းပုံစံ(Design & Detail Drawing)၊
(၁) Layout Plan တွင် Canopy နှင့် ပန့်များ၊ မြေအောက်သိုလှောင်ကန်များ၊ မီးသတ်အုတ်ရေကန်၊ သဲကန်နှင့် မီးသတ် စနစ်တို့ ထည့်သွင်းရေးဆွဲရမည်ဖြစ်ပြီး အရောင်းဆိုင်အဆင့်အလိုက် ရုံးအဆောက်အဦ၊ ဝန်ထမ်းနားနေဆောင်၊ ရေစင်၊ မီးစက်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ Convenience Store၊ Car Service၊ Car Wash စသည်တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း ရေးဆွဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပတ်လည်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦ၊ လမ်း၊ နေအိမ် စသည်တို့ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်သွင်းရေးဆွဲရမည်။ အများပြည်သူသွားလမ်းမကြီးများ၊ လမ်းသွယ်များ၊ မီးရထားလမ်း၊ မြစ်ချောင်း စသည်တို့ ရှိနေပါက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်နေသည့်အနေအထားဖြင့် ရေးဆွဲရမည်။ Layout Plan အား A3 အရွယ်အစား စာရွက် ဖြင့်ရေးဆွဲရမည်။ အဆိုပြုထားသည့် သိုလှောင်ရုံ၊ သိုလှောင်ကန်များနှင့် ပတ်လည်အနီးပတ်ဝန်းကျင် အဆောက်အဦ များ၏ အကွာအဝေးကို (ပေဖြင့်) တိတိကျကျဖော်ပြရမည်။
(၂) Layout Plan တွင် ရပ်ညွှန်းပါရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အဆောက်အဦ တည်နေရာ၊ လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ ပိုင်ရှင်အမည်၊ သိုလှောင်သုံးစွဲလိုသည့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ ဂါလန်ပမာဏ၊ စကေး၊ ရေးဆွဲသူအမည်၊ ရက်စွဲတို့ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားသော Title Block ပါရှိရမည်။ အသေးစိတ်ပုံစံများရေးဆွဲရာတွင် ရှေ့၊ နောက်၊ ဘေး၊ အပေါ်မှမြင်ရပုံ၊ ဖြတ်ပိုင်းပုံများကိုဖော်ပြရမည်။ Layout Plan နှင့် အသေးစိတ်ပုံများကို A3 အရွယ်အစားစာရွက်ဖြင့် စကေးကိုက် ရေးဆွဲရမည်။
(၃) အဆောက်အဦ၊ သိုလှောင်ကန်တို့တွင်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းအသီးသီးနှင့် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ (M.S, C.G.I, Angle Iron, Concrete အရော၊ Plaster အရောစသည်များ) ကို ပုံတွင်အသေးစိတ် ဖော်ပြရမည်။
(ဈ) အဆိုပြုလျှောက်ထားစဉ်ကာလအတွင်း အပိုဒ် ၁၅ (ဇ) ပါ အချက်များကို ဌာနကအတည်မပြုသေးမီ ကြိုတင်တည်ဆောက်မှု မပြုကြောင်း ကတိဝန်ခံချက်ပါရှိရမည်။
၁၈။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်သည် လျှောက်ထားချက်အပေါ် စစ်ဆေးစိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်းတွေ့ရှိရပါက တည်ဆောက်မည့် အကွက်ချပုံစံ (Layout Plan)၊ အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းပုံစံ (Design & Detail Drawing) များအား အတည်ပြုပါကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုမိန့်များရယူပြီး လိုအပ်သလိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါကြောင်း လျှောက်ထား သူထံ အကြောင်းကြားမည်။၁၉။ အပိုဒ် ၁၈ ပါအကြောင်းကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိသူသည် အဆိုပြုပုံစံအတိုင်း တည်ဆောက်ပြီးစီး၍ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချရန် အသင့်ဖြစ်ပါက အောက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများပြည့်စုံစွာဖြင့် လိုင်စင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်သို့ လျှောက်ထားရမည်-
(က) သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ် / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်မိတ္တူ၊
( ခ) ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနက အတည်ပြုထားသော အရောင်းဆိုင်၏အကွက်ချပုံစံ (Layout Plan) နှင့် အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းပုံစံ (Design & Detail Drawing) မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
( ဂ) သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၏ သိုလှောင်ခွင့်လိုင်စင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
(ဃ) တည်ဆောက်ပီးစီးသည့်အရောင်းဆိုင်အား ရှေ့၊ နောက်၊ ဝဲ၊ ယာ ရိုက်ကူး ထားသည့် (၄×၆) လက်မအရွယ်ရှိရောင်စုံဓါတ်ပုံ (၄)ပုံ ၊ သိုလှောင်ကန်အား ထင်ရှားပြတ်သားစွာရိုက်ကူးထားသည့် (၄×၆) လက်မအရွယ်ရှိ ရောင်စုံဓါတ်ပုံနှင့် အခြား ဆက်စပ် Facility များ၏ ဓာတ်ပုံများ၊
၂၀။ တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့်အရောင်းဆိုင်ကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိ ဦးဆောင် သည့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရမည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက ပြုပြင် ဆောင်ရွက်စေပြီး ထပ်မံကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရမည်။
၂၁။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိ ဦးဆောင်သည့်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး လိုင်စင်ထုတ်ပေးသင့်ကြောင်း ထောက်ခံတင်ပြလျှင် ရုံးချုပ်က လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့တင်ပြမည်။
၂၂။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးက လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ပါက သက်တမ်း(၁)နှစ်ရှိ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အရောင်းဆိုင်) ကိုထုတ်ပေးမည်။
၂၃။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်(အရောင်းဆိုင်)၏ သက်တမ်းမှာ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသည့် နေ့မှစတင်၍ (၁)နှစ်တိတိဖြစ်သည်။
၂၄။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်(အရောင်းဆိုင်)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်သောအခကြေး ငွေများကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ပေးသွင်းရမည်။
၂၅။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်စတင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့်ရက်မှစတင်၍ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ၂ လ အတွင်း သက်တမ်းတိုးမြှင့် ခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေး ရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည် –
(ခ ) လိုင်စင်ရရှိသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်မှုသက်သေခံလက်မှတ် မိတ္တူ၊
(ဂ ) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်၊
(င ) သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၏ သက်တမ်းတိုးပြီးစက်သုံးဆီသိုလှောင်ခွင့်လိုင်စင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
၂၆။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း (အရောင်းဆိုင်)အား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိလျှင် လိုင်စင်သက်တမ်း(၁)နှစ်တိုးမြှင့်ပေးမည်။
၂၇။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အရောင်းဆိုင်) သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်သောအခကြေးငွေ များကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ပေးသွင်းရမည်။
၂၈။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း(အရောင်းဆိုင်)အား ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော် ပြပါစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-
( ခ) သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၏ သက်တမ်းရှိသိုလှောင်ခွင့်လိုင်စင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
( ဂ) ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနက အတည်ပြုထားသော အရောင်းဆိုင်အကွက်ချပုံစံ (Layout Plan)၊ အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းပုံစံ (Design & Detail Drawing) မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
(ဃ) ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတိုးချဲ့လိုသည့်အကွက်ချပုံစံ (Layout Plan)၊ အသေးစိတ် ဒီဇိုင်းပုံစံ (Design & Detail Drawing)မူရင်း၊ (လိုင်စင်ရရှိပြီးဆိုင်အဟောင်းကို တိုးချဲ့/ ပြုပြင်/ တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါက အသစ်တည်ဆောက်သည့်အဆောက်အဦ၊ သိုလှောင်ကန်စသည်တို့ကို Layout Plan ပေါ်တွင် အနီရောင်ဖြင့် ထပ်တိုး/ Proposal ဟုရေးသားဖော်ပြရမည်။)
( စ) သိုလှောင်မှုပမာဏပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ခွင့်ပြုမြေဧရိယာပမာဏ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စက်သုံးဆီအမျိုးအစား ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသိုလှောင်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်၊
၂၉။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် လျှောက်ထားမှုအားစိစစ်၍ ကိုက်ညီပါက ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း (အရောင်းဆိုင်) အား ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခွင့်ပြုမည်။
၃၀။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း (အရောင်းဆိုင်) ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်သောအခကြေးငွေများကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ပေးသွင်းရမည်။
၃၁။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အရောင်းဆိုင်) အား ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော် ပြပါစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-
(က) ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲလိုသူ၏ (၂×၁.၅) လက်မဓာတ်ပုံ၊ အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုသက်သေခံလက်မှတ်မိတ္တူ၊
( ဂ) ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အရောင်းဆိုင်) မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
( င) မူလပိုင်ရှင်နှင့် ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲလိုသူတို့၏ နှစ်ဦးသဘောတူ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်စာချုပ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
(စ) မူလပိုင်ရှင်နှင့်ပတ်သက်သည့် မြို့နယ်ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန် ဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်၊
(ဆ) ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်၊
၃၂။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အရောင်းဆိုင်) ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲ လျှောက်ထားမှုအားစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါက ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုမည်။
၃၃။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အရောင်းဆိုင်) ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲသူက သတ်မှတ်ထားသည့်ကျသင့်သော အခကြေးငွေ များကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ပေးသွင်းရမည်။
၃၄။ အရောင်းဆိုင်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ ပြည့်စုံ စွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-
(က) အမည်ပြောင်းလဲပြီးအရောင်းဆိုင်၏ သက်တမ်းရှိ စက်သုံးဆီသိုလှောင်ခွင့် လိုင်စင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
( ခ) ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်(အရောင်းဆိုင်)မူရင်း၊မိတ္တူနှင့် သက်တမ်းတိုး ကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
၃၅။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် အရောင်းဆိုင်အမည်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားမှုအားစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက် နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါက အရောင်းဆိုင်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုမည်။
၃၆။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အရောင်းဆိုင်) ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူမှန်ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာ နှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထား ရမည်-
၃၇။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း လိုင်စင် (အရောင်းဆိုင်) ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူမှန်ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအားစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါက မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးမည်။
၃၈။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အရောင်းဆိုင်) ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်သောအခကြေးငွေများကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။